Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiarovan-tena : Mampanahy ny fisian’ny mpitondra vita vaksiny
Fiarovan-tena : Mampanahy ny fisian’ny mpitondra vita vaksiny
Mampametra-panontaniana ihany ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena, ao anatin’izao fiatrehana ny valan’aretina Coronavirus izao. Rehefa mijery ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana mantsy, dia tahaka ny efa nanao vakisinin’ny Covid-19 niafina tany ambadibaka tany ny sasantsasany amin’izy ireo. Iray amin’ireo mpitondra nahitàna izany fihetsika izany ohatra ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo.
Raha tsiahivina dia ny faha-5 ny volana marsa lasa teo no nanatanteraka fihaonambe tamin’ny fianakaviamben’ny artista malagasy ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina, tao amina trano filanonana iray teny Ivato teny. Mpanakanto avy amin’ny lafy valon’ny Nosy an-jatony no tonga namaly ny antso, tamin’io fotoana io, izay notarian-dRamatoa minisitra mpitondra tenin’ny governemanta. Ny zavatra tena mahagaga anefa ary mahatonga ny fanahiana hipetraka, dia ramatoa minisitra tenany mihitsy no nangataka tamin’ireo artista rehetra tao anaty trano mba hanala ny saron-tava eny amin’izy ireo. Tsara tsipihana anefa fa tamin’izany datin’ny 5 marsa izany, efa nirongatra izay tsy izy indray ny valan’aretina ary manaporofo izany ny tarehimarika navoakan’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.
Tsy vitan’izay ihany fa mbola nisy ny fandihizana nandritra ny fihaonana, ary nitety latabatra niara-naka sary fahatsiarovana tamin’ireo mpanakanto i Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo. Tsy nisy fanaovana saron-tava mihitsy tamin’izany zavatra rehetra izany, tahaka ny hoe efa tsy misy eto Madagasikara intsony ny Coronavirus. Marihana fa tsy nafenina izany satria navoaka tao anatin’ny kaonty Facebook-n’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera avokoa ny sary rehetra. Izany trangan-javatra izany indrindra no mahatonga ny fanahiana amin’ny mety efa nanaovan’ny mpitondra fanjakana vakisinin’ny Covid-19 miafina tany ambadika tany. Raha ny lôjika mantsy, tokony niaro tena mafy ramatoa minisitra, tamin’io fotoana io, satria ny rehetra dia mahafantatra fa faran’izay mifandray sy miserasera amin’ny olona maro ny artista ka mety ho voan’ny tsimokaretina. Maro amin’ny olom-pirenena aza moa no resy lahatra fa tamin’ity hetsika nataon’ny ministera ity no nahazoan’i Ndriana Ramamonjy ny tsimokaretina, ity farany izany lavo ny 31 marsa teo. Tahaka ny tsy misy fahatahorana ny valan’aretina mihitsy manko ny fihetsika nasehoan’i Lalatiana Rakotondrazafy, ary izany no manamarina ny fanahiana amin’ny mety efa nahavitan’ny mpitondra vakisiny. Tsy ny minisitra ny kolontsaina sy ny serasera ihany no hita ho manana izay tsy firaharahina ny fepetra ara-pahasalamana izay fa mpitondra fanjakana maromaro. Raha izany tokoa mantsy ny zava-misy, dia fiatsaram-belatsihy sy famitaham-bahoaka fara-tampony no ataon’ny fitondrana satria ny vahoaka amporisihana hisotro sy hihinana ny Tambavy CVO sy ny CVO+ kanefa ry zareo mpitondra fanjakana manao vakisiny miafina noho ny tahotry ny fatin’ity areti-mandringana ity.
Tsena eto Andrenivohitra : maro ny mpivarotra voafitaka
Zotram-pifamoivoizana – Ambohijatovo
Asan-dahalo any Bealalana